Mareykanka oo faah faahiyey duqeyn uu la beegsaday Xarumo Al-Shabaab | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo faah faahiyey duqeyn uu la beegsaday Xarumo Al-Shabaab
Mareykanka oo faah faahiyey duqeyn uu la beegsaday Xarumo Al-Shabaab
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey Gobolka Baay.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay shalay oo ku beegneyd 13/1/2021 ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen degaanka Buulafuulaay ee Gobolka Baay ,isla markaana ay la beegsadeen Xaun ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen Sarkal ka tirsanaa Al-Shabaab,sidoo kalena ay ku taageerayeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Ururka Al-Shabaab, sida uu sheegay Taliyaha, Taliska Hawlgallada Gaarka ah Mareykanka ee Afrika.
““Duqeynta ka dhacday Buulo fuulaay, waxay muujineysaa go’aankeenna waxayna hoos u dhigeysaa awoodda Al-Shabaab ee hanjabaadda Soomaaliya iyo deriskeeda, waxaan qorsheyneynaa in aysan jirin meel ammaan ah oo ay ku dhuuntaan Al-Shabaab ayuu yiri Maj. Gen. Dagvin Anderson.
Mareykanka ayaa inta badan duqeymo dhinaca cirka ah ka fuliyo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana duqeyntaan ay kusoo aadeysaa xilli Mareykanka inta badan Ciidamadii ka joogay Soomaaliya uu kala baxay, isla markaana ay yaraadeen duqeymihii uu fulin jiray.